भोलीबाट मट्टीतेल वितरण गर्दे निगम, ५ सय केल वितरण गिरने « Bizkhabar Online
भोलीबाट मट्टीतेल वितरण गर्दे निगम, ५ सय केल वितरण गिरने
15 November, 2015 11:51 am
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भोलीबाट मट्टीतेल वितरण गर्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउनका लागि समस्या बढ्दै गएपछि तत्कालको समस्या समाधान गर्न मट्टीतेल बितरण गर्न लागिएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
हाल अमलेखगञ्जमा स्टकमा रहेको मट्टीतेललाई काठमाडौं ल्याएर वितरण गर्न लागिएको निगमका प्रवन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले जानकारी दिए । ‘हाल काठमाडौंका डिपोमा रहेका मट्टीतेल सकिएको छ,’ उनले भने, ‘उपत्यकावासीका तत्कालका समस्या समाधान गर्न अमलेखगञ्ज डिपोमा रहेको मट्टीतेल ल्याएर वितरण गर्न लागेका हौं ।’
हाल अमलेखगञ्ज डिपोमा ५ सय किलोलिटर मट्टीतेल स्टकमा रहेको छ । उक्त मट्टीतेललाई काठमाडौं ल्याएर पालैपालो वितरण गरिने समेत निगमले जानकारी दिएको छ । जसले गर्दा केही दिनका लागि खाना पकाउन सहज हुने समेत निगमको दावी छ ।
उपत्यकावासीलाई खाना पकाउन ग्याँस तथा मट्टीतेलको अभाव बढ्दैगएपछि आजबाट टिम्बर कर्पोरेशनले दाउरा वितरण शुरु गरेको छ । कर्पोरेशनले राजधानीका २ ठाउँबाट दाउरा वितरण शुरु गरेको हो । उसले प्रतिकेजी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १५ रुपैयाँ र संस्थागत तथा होटलका लागि १७ रुपैयाँ मुल्य निर्धारण गरेको छ ।
दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसायीहरु सडकमा, तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन माग
काठमाडौं । दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले तत्काल दोहोरी तथा रात्रिकालिन
प्रधानमन्त्रीले बोलाए ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक, के आउँला नयाँ निर्णय ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । आज ४ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी
कहिले खुल्छ सवारी लाईसेन्स परीक्षा र आवेदन ? विभाग भन्छ-प्रदेश सरकारको जिम्मामा छ, फोन गरेर बुझ्नुस
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाईन आवेदन र परिक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई